Mara American Bandogge dị ọkụ ma sie ike - Reeddịrị
Otu n'ime udiri anumanu di egwu karie n'ebe ahu ka a na-akpọ onye na-egwu egwu American Bandogge / Bandog .
A makwaara dị ka American Bandogge Mastiff, American Mastiff, Swinford Bandog, MastiBull, ma ọ bụ American Masti-Bull , canine a bụ otu n'ime nzọ gị kachasị mma iji mee ka ụjọ jide ndị na-achọ ịbata.
Zute American Bandogge
Ma agbakwala ma zụta Bandogge ngwa ngwa. Ì chere na ị nwere ihe ọ ga-ewe ịbụ onye nwe ya? Nọgide na-agụ iji chọpụta.
Ndi Bandog bu otu ihe dika olulu ehi?
Kedu ka Bandogge dị?
Ndi Bandogs di egwu?
Na-elekọta nnukwu fido
Ogologo oge ole ka Bandogge Mastiffs dị?
Zụta nwa nkita: Bandogs ọ bụ iwu na-akwadoghị?
Mkpebi ahụ: American Bandogge bụ anụ ọhịa dị egwu
Mba, ha abụghị. Bandogges bụ hodgepodges nke na-arụ ọrụ na ichebe udiri anumanu . Ha nwere ogologo akụkọ ihe mere eme malitere na 1200s a na-ekwukwa na ha si Europe, ebe ndị na-egwu egwuregwu ji ha ịchụ nta na ọgụ.
N’ezie, “Bandog” bụ okwu Bekee ochie nke pụtara “agbụ”. Okwu ahụ ghọrọ akụkụ nke aha ìgwè a, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị Bandogges oge mbụ nọ na-agbanye agbụ n'ehihie ma hapụ ha n'abalị iji chebe ihe mgbakwasị ahụ.
Ọsọ ọsọ ọtụtụ narị afọ mgbe e mesịrị ka N'afọ 1960 , mgbe John Swinford, onye America nke anụmanụ, na-anwa ịhazị ụdị.
Ya na Neapolitan Mastiff gafere American Pit Bull Terrier. Ebumnuche - imepụta nkịta nche kacha .
Bandogges nke oge a nwere ike ịbụ ngwakọta nke ọtụtụ ọbara Molosser, gụnyere:
Mastiff ( Bekee ma ọ bụ Neapolitan )
Gbalị iwepụta ụdị aha nke gụnyere ihe niile a nwere bụ mmeri na-efunahụ. Kama, “American Bandogge” bụ okwu ncheta catchall na-ezo aka Nchikota nke udiri anumanu ndia .
N'agbanyeghị ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa Bandog pụrụ iche, ha na-ekwe nkwa ịbụ a oke , ịchịkwa canine .
Ha nwere aha ọjọọ ma jiri ya na-alụ ọgụ n'akụkụ ụfọdụ nke US, mana nke bụ eziokwu bụ na Masti-Bull na onye nwe ya nwere ike bụrụ ezigbo enyi .
Ichere na ị ga-ejikọ ụdị osisi dị iche iche mgbe niile? American Bandogge na-ewere achicha ahụ. E nwere ihe fọrọ nke nta ụzọ adịghị iji chọpụta otú ha ga-adị n’enweghị nzukọ ha.
Enwere ike ịme aji MastiBull nke agba ọ bụla. Kacha nkịtị bụ brindle, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ merle, fawn, ọbara ọbara, ọlaedo, na nwa. Ha mkpụkpu, uwe mkpụkpu na-enwekarị aka nke na-acha ọcha agwakọtara na, mana usoro a kapịrị ọnụ enweghị usoro.
Ọ bụ ezie na njirimara ndị akọwapụtara na-agaghị ekwe omume ịkọ, usoro ihe eji arụ ọrụ nke American Mastiff zuru oke.
Ha na-enwe ọfụma, akụkụ akụkụ anọ . .B. bellowing obi na ubu sara mbara nye Bandog otu nnuku ọnụnọ.
Ntị ha ndị nwere akụkụ atọ na-anọ n’elu isi ọkpọ, imi ha nwekwara ike ịbụ oji ma ọ bụ ọbara ọbara, anya ha sara mbara ma gbaa ọchịchịrị. Na isi nke ọzọ, ọdụ masịrị MastiBull ahụ dị gịrịgịrị ruo ebe.
Size: Kedu otu nnukwu American Bandogge Mastiffs si enweta?
Bandogs bụ buru ibu. Generallymụ nwoke na-atụle oke 100 ka paụnd 140 (45 ruo 64 n'arọ) ma kwụrụ Sentimita 19 ruo 30 (48 ka 76 cm) ogologo.
Femụ nwanyị adịchaghị mkpụmkpụ karịa ụmụ nwoke, mana ha na-adị nwayọ, na-erugharị na nkezi 85 ruo 100 pound (39 ruo 45 n'arọ).
N'agbanyeghị ọnọdụ nkịta nkịta XXL ha, Bandogges nwere ike inwe afọ ojuju na ụlọ ma ọ bụ obere ụlọ , ma ọ bụrụ na ha na-emega ahụ nke ọma.
Chee echiche banyere American Mastiff dị ka nsụgharị canine nke Dr. Jekyll na Mr. Hyde. Na ndị ezinụlọ ha, nkịta ndị a dị nwayọọ ma nwee obiọma. Nye ndị bịara abịa na ihe iyi egwu, ha dị egwu .
Omume ha nwere ike gbanwee ozugbo ma ọ bụrụ na ha achọpụta ihe ọ bụla na-enyo enyo.
O nwekwara ike iju gị anya ịmara na Bandogges dị akwa na umuaka n'ihi na ha na-echebe, kensinammuo ọdịdị. A maara ha dịka nwatakịrị, na-enweta aha nickname dị ka 'Mama Bear' na 'Silent Peacekeeper.'
Dị ka ihe siri ike dị ka Bandog gị nwere ike ịnwa ịdị, ha enweghị ike ime onwe ha ka ha dị obere. Nnukwu ha na-abawanye nsogbu ahụ ụmụaka nwere ike imerụ ahụ n'oge egwuregwu.
Ọ kachasị mma ilekọta mmekọrịta ndị a na ịkụziri obere ụmụ gị otu esi emeso nnukwu fido a iji zere ihe ọghọm.
MastiBull na-esokarị anụ ụlọ ndị ọzọ - ma ọ bụrụ na a zụlitere ha ọnụ ma na-emekọrịta ihe nke ọma. Lelee ndị Bandogges ndị a dị ebube na-enwe nnọkọ ehihie ọnụ!
Ma atụla anya na Bandog gị ga-abụ enyi a na ụmụ mmadụ ma ọ bụ anụ ụlọ a na-amaghị ama.
Dogkpụrụ a nke doggo bụ “ taa aru, juo ajuju ikpeazu . ” Bred iji chebe ma chebe, ha na mpaghara ma nwee obi ike . Ha anaghị alaghachi ngwa ngwa, ha agaghịkwa ala azụ ime ihe iyi egwu.
American Bandogges bụ aha ọjọọ maka ileghara akụkụ ogbugbo nke “ogbugbo na ijide” ya anya. N'ezie, nkịta ndị a egbula ọtụtụ . N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enweghị ike ịdọ aka ná ntị tupu ha ebuso.
Nke a abụchaghị mmejọ na akụkụ ha. Ndị nkịta na-eche nche ga-enwe ike iche echiche n'ụkwụ ha, ka emechara. Otú ọ dị, ọ pụtara na ndị nwe ọhụụ agaghị ahapụ ụdị a .
Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nwere ike chọọ ichegharị n’inweta canine a, kwa. Bandogges na-enweta aha ha site na ịgbụ ụbọchị niile, mana nke bụ eziokwu bụ na ụdị a adịghị anya naanị.
Ahụhụ ike mmụọ ma ọ bụ mbibi anụ ụlọ gị nwere ike ịka njọ ma ọ bụrụ na ọ hapụrụ onwe ya ọtụtụ mgbe.
Etu esi edozi American Bandogge Mastiff
Bandogs nwere ọgụgụ isi ma nwee ọgụgụ isi, mana ịdị njikere ha na-atọ ụtọ sitere na “kpamkpam kpamkpam” ruo na “akara ukwu”.
Nyere nha ha na mmuo nchedo, ha -achọ a veteran nkịta nwe . Enweghị ọzụzụ na njikwa kwesịrị ekwesị, canines ndị a nwere ike ịmalite ime ihe ike ma sie ike nchịkwa.
Ha hụrụ nlebara anya mana ịchọrọ ikike . Jiri nkwalite dị mma iji nweta uru nke a. Mgbe pup gi gha erite na-emeso na oge eji egwuri egwu, o gha enwekwu mmasi iburu n'uche omume ya.
Zere ọzụzụ dị ike . Ihe ikpeazu ichoro bu ikuziri nkita gi itu ujo ma obu itu ujo gi na mmadu ozo.
Mgbe emechara nke ọma, ọzụzụ MastiBull ga - eme ka ike nke ìgwè nwee ike ma mee ka ọnọdụ gị dị ka nkịta dị elu.
Nwa nkịta na-erube isi nwere ike inyere ntọala dị mma maka Bandogge na-eto eto, ọ ga-ebido mmekọrịta ha na ụkwụ aka nri.
Dika Hercules nke nwere ukwu ano na-eto, ị nwere ike leba anya na usoro ọzụzụ ọzụzụ siri ike. Ha na-arụ ọrụ ma na-echekwa mkpụrụ ndụ ihe nketa, ụdị a karịrị akarị n’ịdọta ihe, ịchụso ihe, ọrụ ndị uwe ojii, yana ọzụzụ ọzụzụ !
Lelee vidiyo a nke American Bandogge na-arụ ọrụ na ọzụzụ nchebe. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ihe a na-eme ya ka ọ mee, mana ọ na-echekwa na onye na-elekọta ya oge niile.
Ihe kachasị mkpa icheta bụ nke ahụ ị bụ onye ndú mkpọ . Gị MastiBull kwesịrị ịhụ gị dị ka onye isi na tụkwasa ndu gị obi. Nchebe nkịta gị na ndị gbara gị gburugburu dabere na ya.
O nwere ike isi ike ikwere, mana Nlekọta Masti-Bull nke America adịghị achọsi ike .
E jiri ya tụnyere oge niile na ume ị ga-eji na ọzụzụ, ịchekwa ahụike Bandog na ọdịdị ya bụ ịgagharị na ogige ahụ.
Gba akwụkwọ: ịchacha na ịsa ahụ American Mastiff gị
Bandogges bụ agafeghị oke . Jiri ahịhịa roba, dị ka a ejiji aka , Ugboro abụọ na atọ n’izu ụka iwepu aji ma ọ bụ nke nwụrụ anwụ. Jiri akwa dị ọcha hichaa ha n'ezie iji wepụta uwe elu ha.
Nkịta ndị a bụ amara na ọ na-amị amị ma na-anwete ntakịrị ma guzogide agụụ na-asa gị pooch kwa mgbe.
Ọ bụrụ na Bandog gị nwere wrinkles, jiri a nhichapụ nkịta ma ọ bụ akwa mmiri dị ọcha iji kpochaa n'etiti akpụkpọ ahụ ya. Ọ nwere ike inye aka mee ka ọ na-anụ ụtọ ihe na-esi ísì ụtọ n'emeghị ka ajị ya mee.
Ntu trils nwere ike ime kwa ọnwa ma ọ bụ karịa, mana kwa ụbọchị nlekọta eze dị mma. Ọ bụrụ na ịbịaru nso na nke onwe gị na agba nke buru ibu abụghị iko tii gị, mee atụmatụ ịsa ezé ha otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu, ma ọ dịkarịa ala.
Tupu anyị aga n'ihu na-azụ Bandog gị, anyị kwesịrị ịkọ banyere ejiji ahụ n'ezie kwesiri ka ewebata ya na nwa nkita.
Ọ gwụla ma ịchọrọ nkịta 100-paụnd na-agba ọsọ n'oge oge ịsa ahụ ma ọ bụ na-agbapụ na ntu ntu, nke ahụ bụ.
Idobe afọ gị Bandog zuru
Nkịta buru ibu na-eri ihe otutu . Mastiff America gị chọrọ Iko 4 ruo 5 nke nri kwa ụbọchị.
Kewaa ego a n'ime nri abụọ, ma lelee nri ngwa ngwa n'ihi na nke a nwere ike ime ka nsogbu ahụike ka njọ. Lee anya n'ime ngwa-ngwa-efere efere ma ọ bụrụ na gị MastiBull scarfs ala ya kibble.
Ndị a droolers dị arọ bụ akpịrị na-akpọkarị ya nkụ ma na-adịkarịghị a drinkụ mmiri sụrụ asụ. Inye Bandog gị na mmiri ọhụrụ, mmiri dị ọcha nwere ike ịdị ka ọrụ nke abụọ, mana ha ga-enwe ekele maka mbọ gị.
Bandogges chọrọ ọtụtụ mmega ahụ?
Bandogge Mastiffs na-arụ ọrụ nke ọma. Ha adịchaghị mkpa nnukwu ogige, ma ha nwere ike ibibi ihe na-enweghị ọrụ ọ bụla. Mee atụmatụ Nkeji 45 ruo 1 awa nke mmega ahụ kwa ụbọchị iji mee ka ha ghara izu ike.
Bandog gị ga-enwe ọtụtụ usoro mmega ahụ, mana ha nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo ndị mmeri maka ogige nkịta ma ọ bụ nlekọta ụbọchị.
N'akụkụ ahịrị ndị ahụ, hapụ Bandog gị naanị ka ha gbatịa ụkwụ ha ma ọ bụrụ na ha nọ n'ime oke nke ngere na-agba nkịta.
Nke a abụghị ụdị fido ịchọrọ ịtọghe. Chọghị ị ga-ahụ maka nkịta gị merụrụ ahụ ma ọ bụ mejọọ onye ọzọ.
A ka nwere ọtụtụ ụzọ maka MastiBulls iji gbaa ume, dịka na-egwu mmiri ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya . Omume mmetụta dị ala dịka ndị a zuru oke n'oge nwa nkịta na nká mgbe nkwonkwo Masti-Bull na-akawanye njọ.
Ozi ọma ọzọ bụ na Bandogges nwere ike ịhụ ezinụlọ gị n'anya ma chebe ya ogologo oge. Na nkezi afọ ndụ nke Afọ iri , ha ga-anọ ya obere oge.
Ma ugbu a, akụkọ ọjọọ: dị ka Bandogs siri ike, ha abụghị ndị a na-apụghị imeri emeri. A na-eme ka ụlọ ike ndị a nwee nnukwu nsogbu ahụike dị iche iche, enwere ike igbochi ya na nke a na-apụghị izere ezere.
Mkpụrụ ndụ ihe nketa nke Masti-Bull nwere ike keta autoimmune thyroiditis , ọrịa cancer, akwụkwụ, ọrịa anya, dịka atrophy retinal na-aga n'ihu, hip na nkwonkwo dysplasia, nsogbu akpụkpọ ahụ.
Ọrịa ọzọ na-arịakarị bụ bloat ma ọ bụ gastric dilatation-volvulus . Ọ na-ada dịka nchegbu ahụike kachasị dị nro na ndepụta a, mana ọ na-eyi ndụ egwu. Ọ na - amalite mgbe nkịta gị nwere oke gas na afọ ha.
Nke a nwere ike ime ka afọ tụgharịa ma gbue ọbara na-eweta akụkụ dị mkpa.
Ọ chọrọ nlekọta ahụike ozugbo, ya mere ịmụta ihe ịrịba ama ma dị njikere ime ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-enyo na MastiBull na-arịa ọrịa a.
Bandogges, yana ndị ikwu Mastiff ibe ha, enweela nnukwu mgbu ndidi , yabụ na ị gaghị ama ozugbo ma ọ bụrụ na ha na-emejọ ma ọ bụ na-enwe mmetụta na-adịghị mma.
Ka mma ị mara ụdị nkịta na omume gị, ọ ga-akacha mma ị ga-enwe ike ịkọ mgbe ihe kwụsịrị.
Mee ihe mgbochi, dị ka idebe akpụkpọ ha ọcha na ịtọhapụ ha ka ha zuru ike mgbe ha risịrị nri ma ọ bụ mmega ahụ. Soro na nleta vet na-aga, yana obi ilu , akpịrị, na akọrọ ọgwụgwọ.
Dị ka nkịta ndị ọzọ Molosser, American Bandogge bụ a esemokwu ìgwè . Ha bụ a na-ahụkarị dị ka onye na-alụ ọgụ na nke na-adịghị agbanwe agbanwe , na-eduga n'ógbè ụfọdụ iji machibido ha kpamkpam.
Romania, Switzerland, na akụkụ ụfọdụ nke United States nwere amachibidoro iwu MastiBull nwe. Tụkwasị na nke a, ụfọdụ ụlọ obibi ma ọ bụ HOA nwere ụdị mgbochi na ebe ga-egbochi gị ịnweta Bandog na ogige ahụ.
Ọ bụrụ na ịmeela nyocha ma nwee ike ịnweta Bandog Mastiff n'ụzọ iwu na mpaghara gị, oge eruola ịmalite ịchekwa. Ọnụ ego nwa nkịta American Bandogge nwere ike ịrị elu dịka $ 2500 .
Enweghị mmasị ị na-akụ ọtụtụ ego a? Nwere ike ịnapụta Masti-Bull mgbe niile. Chọta otu maka nkuchi nwere ike ịdị mfe karịa ka ị chere.
Ndị na-eme ihe nkiri American Bandogge
Ọtụtụ mgbe, mgbe ndị mmadụ na-aga site na ndị na-azụ anụ ma ọ bụ ụlọ ntanye, ha maara agbụrụ nna ha. Buzụ Bandog bụ ahụmahụ pụrụ iche, agbanyeghị.
N'ihi na ọtụtụ ụdị dị iche iche nwere ike ịbụ American Bandogge, na-anwa ịchọta ezigbo ọbara gị nwere ike ọ gaghị ekwe omume .
Zute Bagheera, The Bandog - Isi ihe onyonyo
Ọtụtụ ụlọ ọrụ jikọta ụdị 2 ruo 3 iji mepụta ụdị nke American Bandogge Mastiff nke ha.
Ha kwesiri inwe ike ime ka ị mata nne na nna Masti-Bull mana ọ gaghị eju gị anya ma ọ bụrụ na ha nwere ozi pere mpe banyere ọgbọ ndị gara aga.
Ọbụlagodi na MastiBull gị nwere ezinụlọ ezinụlọ dị omimi, kennels nwere ibu ọrụ kwesịrị inye gị nkwa ahụike maka nwa gị Bandog na ndị mụrụ ya.
Site n'ụzọ, ndekọ ahụike ma ọ bụ asambodo bụ abụghị otu dị ka nlekọta anụmanụ.
Wantchọrọ ihe akaebe na nkịta gị, na ezinụlọ canine ya ozugbo, anaghị eburu ọnọdụ ahụike siri ike.
Nleta Vet dị mkpa, mana ha B NOTGH a ọzọ maka nnwale maka ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Ga-achọkwa ịjụ ndị nwere ike ịkọ ihe gbasara ihe ha na-eme ka ndị bi na ya wee nwee ike imekọrịta ọhụụ.
Ozugbo ha nwere ike, ụmụ nkịta Bandog kwesịrị igosipụta ọhụụ, ụda, na isi ọhụrụ. Dị ka o kwesịrị, usoro a ga-amalite tupu nwa gị na-abanye n'ụlọ ma kwesiri ịga n'ihu na ndụ ha niile.
Yabụ, ebee ka ị nwere ike ịzụta American Bandogge? Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ azụ iji wụgharịa nyocha gị:
Onye America Sentinel K9 (Jackson, MS)
K9 ọkà mmụta (Franklinton, NC)
Blasco Family Bulldogs (KEDU)
I nwekwara ike lelee ibe Facebook, dika West Coast Bandog Mastiffs na Nevada, iji hụ ma ha nwere ụmụ nkịta American Bandogge maka ọrịre.
Cunapụta American Bandogge
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ijikwa Bandogs na ụmụ nwanne nne Molosser ha. Ọ dị nwute, mgbe ndị mmadụ na-atachapụ ihe karịrị ike ha taa, ụdị nnụnụ ndị siri ike dịka ndị a nwere ike kwụsị na ebe mgbaba ma ọ bụ nnapụta.
Mgbe ụfọdụ, omume nkịta na-egosi na ọ dị oke. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ibu ọrụ ego anaghị akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ n'ịhọrọ ikuchi, dị nkwadobe ịrụ obere obere ọrụ iji zụọ MastiBull a zọpụtara ma nweta ntụkwasị obi ya . Enweghị ezigbo ọzụzụ ma ọ bụ mmerụ ahụ maka inyefe ha nwere ike ime ka ha kpachara anya, àgwà nchedo.
Ulo obibi di iche iche juputara na udiri anumanu dika Bandogge Mastiff. Ndị a bụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ banyere ụdị Bandog ị nwetara.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbịaru ezigbo American Masti-Bull nso ka o kwere mee, nyocha maka ebe ndị nnabata ụmụaka Molosser, dị ka ndị a:
Mastiffs na Mutts (Chambersburg, PA)
Ebe Bullpen Way & ebe nsọ Nkechi Okonkwo
E nwekwara nzukọ dị iche iche Btù American Bullmastiff Association , na-ele anya maka canines ndị a ruo mgbe ha nwetara onye nwe ọhụrụ.
American Bandogge Mastiff bụ canine mara mma nke ejiri ya ndị nwe ahụmahụ naanị . A na-echekwa akụkụ ha dị nro, nke na-enweghị nghọta naanị maka ndị otu ngwugwu, yana onye ọ bụla ọzọ zutere egwu n'echebe .
.B. ezi alpha nkịta , Masti-Bulls agaghị aza onye isi na-enweghị uche. ’Ll ga-enwerịrị nkwanye ugwu a. Maka nsogbu ahụ?
Band na-achọpụta American Bandogge na-atụ ụjọ ma ọ bụ na-akpali mmasị? Ikekwe ha abụọ? Gwa anyị ihe kpatara ya!
The mara mma White Swiss Onye Ọzụzụ Atụrụ na Chakwasa ihie
ezigbo ndị ọzụzụ atụrụ German mix
oke collie Australian shepard mix
ogologo oge ole ka mgbada isi chihuahuas na -adị ndụ
ọkara na -acha anụnụ anụnụ heeler ọkara onye ọzụzụ atụrụ Australia
nwa nwanyị nwere imi na -acha anụnụ anụnụ tozuru oke
kedu ka nkịta ọkpụkpụ dị